Ny kalitao mahavariana an'ny efijery manohitra ny famirapiratan'ny iPad Air 2 | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iPad Air, Apple products
Ireo mpankafy Apple izay maniry ny orinasa Cupertino hanomboka hametaka ny seho safira amin'ny iPhones ho avy dia tokony hanefy ny fanantenany sy hamerina hijery azy ireo. ny vokatra tsy mampino izay azo tamin'ny sosona manohitra ny taratry ny efijery iPad Air 2 dia ataovy izay hamerenana amin'ny laoniny ny fampiasana safira (anti-rangotra) amin'ny fitaovana ho avy. Ny manampahaizana izao dia mihevitra ny hanohy ny fampiasana sy ny fivoaran'ity efijery manohitra ny famirapiratra mahomby ity.
Raymond Soneria, tale jeneralin'ny DisplayMate Technologies, dia naneho hevitra fa ny efijery vaovao manohitra ny taratra hita ao amin'ny Apple iPad iPad 2 dia misy taha 2.5 isan-jato mahavariana fisaintsainana. Nambarany fa io no taha farany ambany indrindra izay refesina amin'ny takelaka na finday avo lenta hatreto. Ny fisoratana anarana teo aloha dia nanodidina ny 4.5 isan-jato.
Nanamafy izany ny manam-pahaizana momba ny fampirantiana tsy nanantena ny paoma hampiasa safira eo amin'ny efijery an'ny iPhones ho avy satria ny fitaovana, raha ny tenany, dia efa manana tahan'ny taratra mihoatra ny 8 isan-jato. Be loatra, raha ampitahaina amin'ny taha 2.5 isan-jato azo ao amin'ny iPad Air 2. Raha nanapa-kevitra ny hametraka fitsaboana tsy fitaratra taratra i tablet amin'ny ho avy iPhones miaraka amin'ny efijery safira, dia tsy hamokatra izany satria handiso ny tanjona ny fampiasana safira, izay tsy iza fa ny fisorohana ny vay, satria ny sosona manohitra ny taratra ambony dia hijaly amin'ireo marika ireo. Raha fintinina, ny fametrahana fitsaboana fanoherana taratra ny safira dia ho zavatra tsy misy dikany, satria ny sarona izay hihoatra ny safira dia hitohy hijaly amin'ny rangotra sy marika.
"Ny palitao manohitra taratra dia ampiasaina amin'ny ankamaroan'ireo lantom-peo avo lenta sy fampisehoana", hoy ny fanazavan'i Soneira. “Ny olana dia ny ankamaroan'ireo sosona ireo dia mora vaky ihany ary mijanona hatrany ny dian-tanan-tànana. Apple, na ny iray amin'ireo mpamokatra azy, nahita ny lalana fa mora tohina izy ireo ary mampiseho fanoherana bebe kokoa amin'ny marika amin'ny dian-tànana ”.
Ny fitsapana sy ny fitsapana nataon'i Soneira teo amin'ny efijery iPad Air 2 dia nanambara fa ny tahan'ny tarehimarika ambany dia manatsara ny fifanoheran'ny sary, ny lokony ary ny mahavoky azy amin'ny hazavana voajanahary ary koa mahatonga azy io mora vakina noho izay aseho eo amin'ny efijery.
Niely ny tsaho fa hampiditra fampisehoana safira ao amin'ny fitaovany i Apple rehefa nanao sonia fifanarahana 578 tapitrisa dolara niaraka tamin'ny GT Advanced Technologies, ny orinasa orinasa manokana amin'ny fitaovana sy vokatra vita amin'ny safira. Androany, Apple dia mampiasa ity fitaovana ity mba hiarovana ny faritra sensor an'ny Touch ID ary koa ny fakan-tsary any aoriana an'ny iSight an'ny fitaovana sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » Ny kalitao mahavariana an'ny efijery manohitra ny famirapiratan'ny iPad Air 2
Alex garcia dia hoy izy:
Nanana ny iPad Air 2 nandritra ny andro vitsivitsy aho ary eny, mahatalanjona ny efijery, ary koa ny fihenjanana, ny fikirakirana ary ny zavatra hafa rehetra, saingy heveriko fa ny fanovana nataoko ho an'ny mini3 iPad no tsara indrindra vitako. Mahamenatra fa ny fanatsarana ny Air 2 rehetra dia tsy ao anatin'ny mini 3, fa raha hiteny kosa hoe raha manandrana mini ianao, ny fikirakirana, ny fampisehoana retina ary ireo fahatsapana rehetra ireo dia sarotra be ny mampiasa Air amin'ny fampiononana. Raha ny marina, ny TouchID amin'ny Air 2 no tsy mahazo aina indrindra ampiasaina amin'ny vokatra Apple.
Valiny tamin'i Alex Garcia
iFile dia mifanaraka amin'ny iOS 8 sy iPhone 6 (Cydia) izao
Apple dia afaka namaha ilay "Bendgate" malaza